Home Wararka Al Shabaab oo hoobiyayaal ku weeraray magalaada Buule Burde
Al Shabaab oo hoobiyayaal ku weeraray magalaada Buule Burde
Waxaa xalay Magaalada Buule-burdelagu lagu weeraray hoobiyayaal iyo madaafiic. Duqaayntaan oo sheegteen ururka Al Shabaab ayaa abuurtayi ka dhex abuurtay shacabka cabsi iyo wal wal, waxaana kasoo baxaya warar kala duwan oo ku aaddan duqeyntaasi.
Sida ay shegeen dad goobjoogayaal ah ururka Al-shabaab ay Madaafiic ku tuureen magaalada Buule-burte, gaar ahan saldhigyo ay ku sugnaayeen Ciidanka Dowladda iyo kuwa AMISOM. Dadka degaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta Madaafiicda, waxaana ay sheegeen in taasi ay cabsi ku abuurtay, maaddama ay ka cabsi qabeen in Madaafiicdu haleelaan guryahood, waxaana sidoo kale la sheegay in ay Ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti ay dhowr Madfac tuureen oo ay isaga caabbiyeen duqeynta kaga timid dhanka Al-shabaab.
Xiliga uu weerarkaas dhacayay waxaana Magaalada ku sugnaa Taliyaha Ciidanka Xoogga Soomaaliyeed Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage, oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay gaareen Magaaladaasi. Ilaa iyo hada ma jirto xog rasmi ah oo sheegaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas.